Seheno Corduant, Author at Lemur Conservation Network - Page 5 sur 5
Dihin’ny Varika Maneran-tany 2021
You are here: Home › Seheno Corduant
Author Archive | Seheno Corduant
Fankalazana ny Dihin’ny varika maneran-tany 2018
By Seheno Corduant on septembre 25, 2018 in Bilaogy
Manentana antsika rehetra mpikambana eto anivon’ny LCN sy ireo rehetra izay tia varika mba hiara hankalaza aminay ny dihin’ny varika maneran-tany amin’ity taona 2018 ity. Ankalazaina eto Madagasikara sy maneran-tany mandritra ny volana oktobra ity hetsika ity. Karakarain’ny GERP ny dihin’ny varika maneran-tany eto Antananarivo. Araho eto amin’ity rohy facebook ity ny andinidiny mikasika izany. […]
Mpikambana ato amin’ny LCN mandritra ity volana ity : Fikambanana Mitsinjo
By Seheno Corduant on août 11, 2018 in Bilaogy
Ny fikambanana Mitsinjo no mpikambana ato amin’ny Lemur Conservation Network amin’ity volana ity Aogositra ity. Araho eto ny resaka nifanaovana tamin’i Rainer Dolch, izay Tale mpandrindra ny fikambanana Mitsinjo izay nizara ny momba ny fikambanana, ny asany ary ny ahafahantsika hanampy azy ireo hiaro ny gidro sy ala misy azy. Mba zarao aminay ny […]
By Seheno Corduant on juin 28, 2018 in Bilaogy
Planet Madagascar no mpikambana ato amin’ny Lemur Conservation Network nizara ny momba azy, ny asany ary ny ahafahantsika hanampy azy ireo hiaro ny gidro sy ala misy azy. Mba zarao aminay ny tantara sy ny mombamomba an’i Planet Madagascar Planet Madagascar dia fikambanana tsy miankina ara-panjakana kanadianina nitsangana tamin’ny taona 2015. Miara-miasa amin’ny masoivoho any […]
Ny faritra arovana ao Loky-Manambato any Daraina sy ireo harena ao aminy